‘जनताले सम्झन लायक काम गरेका छौं’ – Yug Aahwan Daily
‘जनताले सम्झन लायक काम गरेका छौं’
युग संवाददाता । १ मंसिर २०७८, बुधबार १२:४३ मा प्रकाशित
वडाध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर–२, सुर्खेत
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार हो । जनप्रतिनिधिसँग सहजै पहुँच हुने भएकाले पनि नागरिकले स्थानीय सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर पनि स्थानीय सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ । साढे चार बर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारले धेरै काम गरेका छन् । यो अवधिमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २ ले के कस्ता काम गर्यो ? जनप्रतिनिधिले जनताको बिचमा गरेका प्रतिवद्धता पुरा भए त ? यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बलबहादुर रोकायसँग हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
जनताको प्रतिनिधि भएकाले जनताकै काममा व्यस्त छु । अहिले हाम्रो पार्टी एमालेको महाधिवेशन पनि चलिरहेको छ । पार्टीको कामको लागि पनि दौडधुप गर्नुपर्ने भएकाले त्यतातर्फ केही समय दिइरहेको छु। यसैमा व्यस्त छु।
विकास निर्माणको अवस्था के छ ?
हामीले वीरेन्द्रनगरका १६ वटा वडाहरु मध्ये वडा नम्बर २ ले मात्र विकासका लागि छुट्याइएको सबै बजेट कार्यान्यन गर्न सक्यो । अहिले पनि छुट्याइएका बजेट कार्यान्वयन शुरु भइसकेको अवस्था छ । करिब ५० प्रतिशत योजनाको सम्झौता समेत भएर काम अगाडी बढिसकेको छ ।
विशेष गरेर वडामा सडक स्तरोन्नतिसँगै खानेपानीका आयोजनाहरुको काम शुरु भएका छन् । कृषि, पशुपालन र आयआर्जनतर्फ पनि केही बजेट हाम्रो वडाको लागि छ । त्यस अन्तरगतका काम पनि हामीले अगाडी बढाइसकेका छौं ।
यो बर्षको बजेटका प्राथमिकता के छन् ?
गतबर्ष हाम्रो वडाको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारका लागि अधिकांश बजेट खर्च गरेका थियौं । हाम्रो वडा कृषि र पशुपालनको लागि पनि उपयुक्त वडा भएको हुँदा हामीले योबर्ष कृषि, पशुपालनका क्षेत्रलाई प्राथामिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसअनुसार काम पनि अगाडी बढिसकेको अवस्था छ । विशेषगरी हाम्रो वडाका युवाहरु बेरोजगार बसेको हुँदा हामीले कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेगरी योजना बनाएका छौं । वडाबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा प्लाष्टिक टनेल पनि हामीले दिएका छौं ।
कोभिडका कारण रोजगारी गुमाएका र कृषि पेशामा आवद्धहरुलाई हामीले टनेल दिएका छौं । युवाहरुलाई कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएका छौं ।
काम गर्दा कस्ता चुनौती आउने रहेछन् ?
साविकको उत्तरगंगाको ७ वडा मिलाएर अहिले एउटा वडा बनाइएको छ । त्यहाँ बिना योजनाअनुसार सडक निर्माण गरिएका छन् । हामी निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले यस्ता सडकहरु निर्माण भएका हुन् ।
ति सडकहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने क्रमममा त्यहाँ नालाहरु निर्माण गर्न खोजिए पनि विगतमा गुरुयोजना नभएका कारण अहिले विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । सँगै अन्य विविध चुनौतीहरुको सामाना गर्नुपर्दो रहेछ । जनताका चाहना धेरै छन् ।
तर हामीसँग स्रोत र साधन न्युन छ । तथापि विकासका काम त अगाडी बढाउनुपर्ने नै रहेछ । हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी इमान्दिारिताका साथ हामीले पुरा गरिरहेका छांै ।
तपाइँको वडामा मुख्य समस्या के छन् ?
गुरुयोजना अनुसार सडक निर्माण भएका छैनन् । त्यसले गर्दा हामीले अहिले ति सडकलाई सुधार गर्दा विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । अझैं पहिले ६ मिटरसम्म सडक निर्माण गर्ने मापदण्ड परिवर्तन भएर ८ मिटरका हुनुपर्ने भनिएको छ ।
पहिले बनिरहेका घरहरुलाई भत्काउने पर्नेहुन्छ । यसले त ठुलो समस्या सिर्जना गर्यो । पहिलो समस्या हो । त्यसका साथै वडामा विकासका माग धेरै तर बजेट पर्याप्त नहुँदा भने अनुसारको विकास गर्नसमेत समस्या छ । हाम्रो वडामा सुकुम्बासी समस्या धेरै छ । ७५ प्रतिशत ऐलानी जग्गामा मानिसहरु बसोबास गरिरहेका छन् ।
ती बस्तीका नागरिकको मुख्य आयस्रोत भारत लगायतका ठाउँमा गएर मजदुरी गर्ने हो । कोभिडका कारण धेरै मानिसहरुको मजदुरी गर्ने बाटो बन्द भएको छ । बजेट अभावकै कारण उनीहरुलाई स्वरोजगार मुखि बाटोमा लगाउन सकिएको छैन ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना के छन् नी ?
रोजगारीको समस्या वडाको ठुलो समस्या हो । हामीसँग प्रयाप्त साधन नहुँदा भनेअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग भएको स्रोत र साधनले कृषि, पशुपालन र विभिन्न सीपमुलक तालिम दिएर केही युवाहरुलाई स्वरोजगारको बाटोमा लगाएका छांै ।
जनताको बिचमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा भए त ?
मैले जनताको बिचमा त्यस्तो कुनै पनि आश्वासन दिएको थिएन । मैले मात्र भनेको के हो भने जनताको काम गर्दा कुनै पनि अनियमितता हुन दिन्न भनेको थिएँ । बजेटलाई सही सदुपयोग गर्छु भनेको थिएँ । त्यहीअनुसार काम पनि गरेको छु। मलाइ कुनै लोभ छैन ।
केही युवाहरुलाई रोजगारी दिन्छु भनेको थिएँ । साथै उद्यमी बन्न सिकाउछु भनेको थिएँ । ती कुरा करिब पुरा भएका छन् । हामी जनताको प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएको हुँदा सबै काम जनताकै पक्षमा गर्ने छौं ।
तपाईँ निर्वाचित भएपछि वडामा के परिवर्तन भयो त ?
म निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिले त तीनवटा पुलहरु जीर्ण अवस्थामा थिए । तिनको सुधार गरेका छौं । सबै टोलमा सडक पहुँच पुगेको छ । सबै सडक कच्ची थिए भने सडक नाला पनि बनेका थिएनन् ।
अहिले सडक कालोपत्रे हुन शुरु भएका छन् भने सबै बाटोहरु ग्राभेल गरिएको छ । नालाहरु बनेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सुधार भएको छ । विद्यालय भवनहरु जीर्ण अवस्थामा थिए । ति भवनहरुको सुधारसँगै जस्ता पाताका छाएका भवन पक्की बनेका छन् । विद्यालय घेरबार समेत गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम भएको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिले एउटा मात्र भवन थियो । अहिले ६३ लाखमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर भ्यालीभित्रको विकट वडाको रुपमा रहेको मेरो वडामा सबै कुराले पछाडी थियो, अहिले यी सबैमा सुधार आएको अवस्था छ ।
कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी छ, यो अवधिमा के काम गर्नुहुन्छ ?
यो बर्ष छुट्याइएको बजेट सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रीत हुनेछ । वडामा विकास भइरकेका र विकास हुन बाँकी योजनाहरुलाई अगाडी बढाउन म रातदिन खटिएको छ । मैले जनतालाई कम्तीमा पनि गरिखाने योजना बोकेको मान्छे हुँ ।
हीअनुसार अगाडी बढ्छु। म अब जनप्रतिनिधि नभए पनि केही ठुला योजना अगाडी बढाएको छु । हाम्रै पालामा रिङरोड बनेको छ । साथै अन्य भौतिक संरचनाहरु प्नि निर्माण भएकाले जनताले पछिसम्म सम्झने छन् भन्ने मलाइ लाग्छ । म सधै जनताकै पक्षमा रहेर काम गर्नेछु।
‘परिस्थिति जस्तोसुकै आओस् हामी तीन मन्त्रालय छोड्दैनौं’
‘कानुन बनाएर मात्र हुँदैन कर्णालीमैत्री कानुन बनाऔं’
‘हामीले प्रतिबद्धताभन्दा धेरै काम गरेका छौं’
आउँदो माघसम्म सबै वाडामा विजुली बाल्छैं’